लकडाउनले फेरिएको हाम्रो जिवनको रफ्तार - बद्री कार्की | OB Media
लकडाउनले फेरिएको हाम्रो जिवनको रफ्तार – बद्री कार्की
आवर बिराटनगर डटनेट | १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १३:१५
बद्री कार्की ,धरान
चार महिना पहिले, COVID- १९ हजारौं माईल टाढा थियो, जुन हाम्रो आफ्नै जीवनबाट टाढा देखिन्थ्यो। तीन महिना पहिले, हामी गनगनहरू सुन्न सक्थ्याैं , तर हामीले कल्पना गर्न सक्दैन थियाैं कि, यो त्यस्तो हदसम्म पुगेको छ र हामीलाई स्तब्ध पार्छ भनेर । दुई महिना अघि, सबै परिवर्तन हुन थाल्याे, र दैनिक, COVID- १९ ले हामीबाट अधिक मानिसको ज्यान लिन थल्यो। COVID-१९ ले ठुलो आँधीबेहरीको रूप लियो । आँधीबेहरी हट्छ तर महामारी हट्न धेरै समय लाग्छ। कोरोना भाइरसले हामीलाई आश्चर्यचकित पार्यो। कसैले पनि भविष्यवाणी गरेका थिएनन कि यसले यति धेरै मानिसलाई मार्नेछ, देशहरुलाई लकडाउन गर्न बाध्य पार्नेछ, स्कूल, कलेज र सार्वजनिक ठाउँ बन्द गर्नेछ र हाम्रो जीवनलाई रोक्नेछ। यो भाइरस सम्पूर्ण विश्वमा जङ्गलमा आगो फैलेझैं फैलियो।
के तपाईंलाई थाहा छ "क्वारेन्टाइन" भन्ने शब्द इटालियन शब्द 'क्वारेन्टा' बाट आएको हो, जसको अर्थ 'चालीस दिन' हुन्छ? कोरोनटाइनको समयमा भाइरसको सम्पर्कमा रहेको वा भए पनि जो कोहीबाट अलग गर्न या रोक्नु हो। क्वारेन्टाइनमा रहनु भनेको यसको मतलब यो हो कि लक्षणहरू विकास भएको खण्डमा तपाईले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो बाहिर निस्कियो भने तपाई भाइरस अरूमा फैलाउँनुहुन्न किनकि तपाई र भाइरस तपाईको घरमा रहनेछ। यस्तो देखिन्छ कि इतिहासले १७२०, १८२० र १ १९२० मा जस्तै प्रत्येक १०० बर्षमा दोहोर्याउदछ जहाँ क्रमशः प्लेगु,हैजा र स्पेनिश फ्लूका कारण धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए।
खैर, कसैलाई थाहा छैन कहिले यो भाइरस जान्छ। हामी डराएका छौं। हामी बोर छौं। हामी एक्लो छौं म भन्छु, "तपाईंको कष्ट खेर फाल्नुहुन्न" र म तपाईलाई अलग्गै नहुने सबैसँग बिन्ती गर्दछु। म सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि यो दिनहरुलाइ उप्लब्धीमुलक बनाउनुहोस्। कोही पनि सिद्ध छैनन।
र सबैलाई सबै अनुभव हुन्न। टेक्नोलोजीको यस युगमा, कुनै पनि कुरा गर्न सकिन्छ। हामी नयाँ चीजहरू प्रयास गर्न सक्दछौं र आफैमा खुशी पार्न सक्छौं। तपाइँ सुरू गर्न महान् हुनुपर्दैन, तर तपाइँ महान हुनु सुरु गर्नु पर्छ।
COVID-१९ बिरूद्ध यो युद्ध छिट्टै समाप्त हुँदैन, अर्को महिना वा अर्को महिना पछि पनि होईन। हुनसक्छ हामीसँग खोप नभएसम्म यस महामारीको सम्बन्धमा सबैको आ-आफ्नै दर्शन हुन्छ। प्रकृतिको वर्तमान दृश्यमा हेर्दा मलाई लाग्छ भाइरस वास्तवमा एक मानव हो। टेक्नोलोजी र पूर्वाधारको द्रुत बृद्धिका कारण हामी केवल विकास सोच्छौं र प्रकृतिलाई बिर्सदै गईरहेका हुन्छाैं । जब सम्पूर्ण विश्व ठप्प छ र जब हरेक ठूला कारखानाहरू र उद्योगहरू बन्द गरिएका थिए; प्रकृति एकदम अचम्मको देखिन्थ्यो। हामी प्राय: यो मौसममा भारी हावाको चाप, तातो मौसम, जंगलको सामना गर्दथियाैं । तर यस पटक, प्रदूषण हटेको छ, सन्तुलन पुनर्स्थापित भइरहेको छ र हामीले प्रकृतिको मंत्रमुग्ध र रमणीय सुन्दरता देखीरहेका छाैं , वर्षा पूर्वानुमानमा फर्किएको छ र हरेक दिन हामि सबैतिर हरियाली देखिरहेकाछाैं ।
हामी धेरै भाग्यशाली छौं कि हामी हाम्रो प्लेटमा खाना राख्न सक्षम छौं, धेरै स्रोतहरू छन् जसले हामीलाई खुशी दिन्छ। विश्वका प्रसिद्ध र सुन्दर स्थानहरूमा हामी भर्चुअल भ्रमण गर्न सक्छाैं ।
तर सबैको लागि समान दृश्य छैन। धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् र धेरै मानिसहरू गुमाउने क्रममा छन् । धेरै व्यक्ति आफ्नो प्लेटमा खाना राख्न असफल हुन्छन्; विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जो दैनिक ज्यालाका लागि काम गर्छन्। यद्यपि सरकारले हालको तालाबन्दीमा छाक टार्न गार्ह्राे परेकालाई खाना वितरण गरिरहेको छ । म ती संगठनहरूलाई ,व्यक्तिहरुलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु ।जसले यस्ताे कठिन परिस्थितिमा सावधानी अपनाएर समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्न दिन रात नभनि काम गरिरहेका छन् । साथै म हाम्रो समाजका ती सबै वास्तविक नायकहरुलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु जस्तो कि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जसले येस्तो माहामारिमा आफ्नो स्वास्थको ख्याल गर्दै बिरामीको उपचारको लागि महान काम गर्दैआएका छन्।
जीवन रहस्य हो। हामीलाई थाहा छैन कि समयले हामीलाई के सिकाउँछ। अहिले, सडकहरू खाली छन तर लामो ड्राइभमा जान असम्भव छ। मानिससँग सफा हात छन तर हात मिलाउन प्रतिबन्ध छ। साथीहरूसँग सँगै बस्ने समय छ तर तिनीहरू सँगै बस्न सक्दैनन। तपाईं भित्रको कुक जागेको छ तर तपाईं कसैलाई खाजा वा बेलुकाको लागि कल गर्न सक्नुहुन्न। जोसँग पैसा छ यसको खर्च गर्न कुनै तरिका छैन। जोसँग पैसा छैन तिनीहरूसँग यो कमाउनको लागि कुनै मार्ग छैन।
मेरो मुटु घरहरूमा विषाक्त वातावरणमा बस्ने मानिसहरूमा जान्छ जो उदासिनता र अन्य मुद्दाहरूको साथ सबैमा सामाजिक दुरी बन्न गइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै व्यस्त तालिकाको कारण हामी सबै ठूलो छुट्टी चाहने गर्दथियाैं र यो त्यो चाहेको छुट्टी भन्दा पनि बढी हो। स्वस्थ बानीहरू, र आत्म-सुधारको लागि समय दिदा लाभदायक हुनेछ। त्यसैले शान्त रहनुहोस् र जारी राख्नुहोस्। काम गरिरहनुहोस् वा अध्ययन गर्नुहोस्। विद्यार्थी बन्न वा काम गर्न तपाई बन्न चाहानुहुन्छ (वा अझ राम्रो); यो महामारी तपाईं बाट यो लिन नदिनुहोस्। राम्रो दैनिक तालिका बनाउनुहोस् र यसमा विश्वासयोग्यता हामीले सोचे भन्दा मूल्यवान छ। यो तपाइँको लुकेको प्रतिभा अन्वेषण गर्न उत्तम समय हो। नयाँ चीज सुरू गर्न नडराउनुहोस। पहिले नयाँ बिउ छर्नुहोस्, एक कार्य फल्नेछ; एक कार्य छर्नुहोस्, एक बानी पलाउनेछ; एक चरित्र छर्नुहोस्, तपाईले चाहानु भएको गन्तव्य पाहुनुहुन्छ। समझदार कामहरू गर्नुहोस र विभिन्न भर्चुअल प्रशिक्षणमा भाग लिनुहोस।
यस भाइरसले हामीलाई परिवारको महत्व सिकाएको छ। त्यसैले आफ्नो परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई माया गर्नुहोस् र तपाईंको आमाबाबुको अनुभव र सम्झनाहरू जान्नुहोस् जुन भविष्यका दिनहरूमा हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र एक अर्कामा घनिष्ट सम्बन्ध बनाउँदछ। घरमा बस्नुहोस र पुस्तकहरू पढ्नुहोस।
यस समयमा आराम, व्यायाम गर्नुहोस ,कलाहरू बनाउनुहोस र खेलहरू खेल्नुस , फिल्महरू र शृंखलाहरू हेर्नुहोस् र आफैंलाई खुशी र आफ्नो सकारात्मक विकास ल्याउने नयाँ तरिकाहरू सिक्नुहोस। यसरी तपाइ कोरोना लाई परास्त गरि लक डाउन लाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्षम हुनु हुने छ ।
सेयर कारोबार पुन: बन्द गर्न निर्देशन
लकडाउनमा दू्र शिक्षाः कति सहज, कति असहज ? – ओम प्रकाश सापकोटा
युवा उद्घमी मञ्च विराटनगरद्वारा मोरङका कैदीबन्दीको सुबिधाका लागि टेलिभिजन सहयोग
मोरङको कटहरीमा सर्पदंश प्राथमिक उपचार केन्द्र शिलान्यास
क्वारेन्टाइनमा नै जन्मिए दुई शिशु ,महिला र बच्चाको अवस्था सामान्य
जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध भनी व्याख्या
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ८८९ कोरोना संक्रमित थपिए
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्र मानेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन माग
COVID-19 Stat: 2020-6-3
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:१०
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०८:३७
विराटनगरमा आजदेखि लकडाउन खुकुलो , बजारमा चहलपहल बढ्यो
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:३७
‘भ्वाईस फर चेन्ज’संस्थाद्धारा विराटनगरमा लकडाउनको विरोध गर्दै शान्ति जुलुुस प्रर्दशन
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:५०
विराटनगरको कोभिड अस्पतालबाट आज एकै दिन २७ कोरोना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:४६
विराटनगरमा गाई काटेर भैसीको मासु भन्दै बेचेको आरोपमा एक पक्राउ
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १२:२२